Archive du 20161208
Fifidianana 2018 �Daty sisa andrasako�, hoy i Dada
Efa vonona tanteraka i Marc Ravalomanana amin�ny fifidianana 2018 ka ny fotoana higadonany sisa no andrasana, raha ny fanambarany nandritra ny fiatrehany ny fanokafana ny fivorian�ireo ben�ny tan�na aty amin�ny ranomasina Indianina teny amin�ny Hotely Colbert Antaninarenina omaly.
Rafitra demokratika Mamotika toekarena, hoy ny pastera Mailhol
Fitaovana entin�ny vahiny iarovana fanjakana eo amin�ny fitondrana mba hahafahany migoka ny harena sy tombontsoa eo amin�ny firenena ny demokrasia raha mbola manaiky ireo vahiny isika, hoy ny pasitera Mailhol, izay lehiben�ny antokom-pivavahana Apokalipsy tetsy amin�ny foiben�izy ireo tetsy Isotry.
Rehefa avy nigadra Tsy maintsy ho vedety, hoy i Cohen Rivolala
Elaela tsy nahenoana an�i Cohen Rivolala, izay lehibena antokom-pivavahana iray eto amintsika.
Vondron�ny senatera taloha Mampitandrina ny mpitondra
Tsy manohitra ary tsy manohana ny fitondrana akory ny Amicale des CST et s�nateurs de Madagascar fa mijanona eo afovoany, hoy ny filohan�ny vondrona, Ralison Roger.
Vondrona Eoropeanina Hanohana ireo tan�n-dehibe eto Madagasikara
Hampivoatra ireo tan�n-dehibe sy ny fiainan�ny mponina ao aminy ny fijoroan�ny birao vaovao mpitantana ny AVCOI (Association des Villes et Collectivit�s de l�Oc�an Indien).
Analamanga Hifidy izay ho filohan�ny Ben�ny tan�na
Hanao fihaonana eny Andoharanofotsy ireo Ben�ny tan�na ato amin�ny Faritra Analamanga. Mandritra izany ihany koa no hanavaozana ny birao mpitantana ny fikambanan�ny Ben�ny tan�na.
Fivorian�ny mpamatsy vola tany Paris Tsy misy tombontsoa ho an�ny vahoaka, hoy ny Aro Riaka
Mbola trosa ihany fa tsy omena fotsiny ilay famatsiam-bola nampanantenain�ireo mpamatsy vola nivory tany Paris ny fiandohan�ny herinandro teo sady tsy misy tombontsoa ho an�ny vahoaka Malagasy velively, hoy Rakotonirina Odon, filohan�ny Antoko Aro Riaka.
Taratasin�i Jean Inona no asanao ?
Miarahaba ry Jean a ! Saika adinoko ny niarahaba fa taitra mafy loatra aho amin�ity loza mitatao eto amin�ny tany sy ny firenena ity kanefa mbola hodianareo tsy hita ihany.
Farihin�Andranotapahana RN4 Lasan�ny Sinoa indray
Mpanjono miisa 75 mivondrona ao amin�ny fikambanana �Fanilon�i Marovatana�,
Mamono mankaiza ?
Tonga amin�ilay fanontaniana hafahafa fametraky ny tanora manao hoe �mamono mankaiza ?� isika izao.
Lany andro mifanenjika ny Malagasy Jihifin�ny vahiny ny harena
Lany andro sy fotoana mimenomenona eto isika saingy tsy hita izay vokany.
Aretina mamono olona any Befotaka Tsy mbola voaporofo fa pesta
Nitondra fanazavana mahakasika ilay aretina pesta any amin'ny distrikan'i Befotaka izay voalaza fa efa nandripaka olona hatrany amin'ny 31 isa omaly ny minisiteran'ny fahasalamam-bahoaka.
Serasera sy teknolojia any an-tsekoly Efa mihatsara ny vokatra azo eto an-drenivohitra
Efa mihatsara na dia vao manomboka aza ny vokatra azo eny anivon�ireo sekoly miankina sy tsy miankina amin�ny fanjakana eto an-drenivohitra mikasika ny fampiasana ny teknolojia sy ny serasera.
Boriborintany faha-3 sy faha-5 Notoloran�ny Orange ivontoerana hahafahana mikirakira solosaina
Taorian�ny Boriborintany fahefatra dia notoloran�ny orinasam-pifandraisana Orange Madagascar ivontoerana hahafahany mianatra maimaimpoana momba ny informatika ihany koa ireo vehivavy sy renim-pianakaviana ao amin�ny boriborintany fahatelo sy fahadimy.